IHoroscope yePisces: Umqondiso wePisces Zodiac kunye neMihla yokuNxibelelana kwayo, Iimpawu kunye neempawu - Pisces
I-Pisces Zodiac Sign Horoscope
Ulwazi lwePisces ngeenkwenkwezi x
Umbala: IMauve, iLilac, iPurple, iViolet, iGreen Green
Usuku: NgoLwesine ngoMvulo
Ukuhambelana okukhulu ne: Umhlaza, iScorpio
Iqabane eligqwesileyo loMtshato kunye neNtsebenziswano: Virgo
Amanani ethamsanqa: 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43, 52
Isikhundla sokuzalwa: NgoFebruwari 19-Matshi 20
Amandla: Unovelwano, ubugcisa, intuitive, ubulumko, umculo
Ubuthathaka: Uloyiko, ukuzithemba ngokugqithiseleyo, usizi, kunye nomnqweno oqhubekayo wokuphuma kwizinto zokwenene, unokuba lixhoba okanye umfeli-nkolo.
U-Aries uyathanda: Ukuba wedwa, ukulala, umculo, uthando, imidiya ebonakalayo, ukuqubha kunye nezihloko zomoya
U-Aries akathandi: Ukwazi-konke, ukugxekwa, ixesha elidlulileyo libuya, inkohlakalo yalo naluphi na uhlobo
IiPisces zinobungane kakhulu, ngoko uya kuhlala uzifumana kwinkampani yabantu abahlukeneyo. Iipisces azinabugovu, zihlala zikulungele ukunceda abanye, ngaphandle kokulindela ukufumana nantoni na ngokubuyisela.
Iintlanzi ziluphawu lwaManzi, kwaye ngoko lo mqondiso ubonakaliswa ngovelwano kunye nokukwazi ukuvakalisa iimvakalelo zayo.
Iplanethi yabo elawulayo yiNeptune, ngoko ke iiPisces zinomdla ngakumbi kunabanye kwaye zinetalente yobugcisa. I-Neptune inxulunyaniswe nomculo, ngoko ke iiPisces zityhila uncamathiselo kumculo ukusuka kumanqanaba okuqala obomi. Banesisa, banovelwano, kwaye bathembeke kakhulu kwaye banenkathalo.
Abantu abazalwe phantsi komqondiso wePisces banokuqonda okucacileyo komjikelezo wobomi kwaye ngoko balawula ukuba nobudlelwane obuhle nabanye abantu. Iintlanzi ziyaziwa ngobulumko bazo, kodwa phantsi kweempembelelo ze-Uranus, iiPisces zinokuthatha indima yomfeli-nkolo ukutsala ingqalelo. Iintlanzi azigwebi abanye kwaye zihlala zixolela. Zikwaziwa njengolona phawu lunyamezelayo lwezodiac.
IiPisces Uthando kunye nesondo
Ngokunzulu ezintliziyweni zabo, iiPisces zizithandani ezingenathemba. Bathembeke kakhulu, bathenda kwaye banesisa ngokungenamqathango kunye namaqabane abo, iiPisces ngabathandi abanomdla abanesidingo sokuba nonxibelelwano lokwenyani kunye namaqabane abo. Ubudlelwane obufutshane kunye nee-adventures aziyonto ingaqhelekanga kulo mqondiso. Ngothando kunye nobudlelwane, bathembeke ngokungaboniyo kwaye balumke kakhulu kwiqabane labo.
Pisces Abahlobo kunye noSapho
Ububele kunye nenkathalo, iiPisces zinokuba ngabahlobo abalungileyo abakhoyo. Enyanisweni, badla ngokubeka iimfuno zabahlobo babo ngaphambi kwezabo. Banyanisekile yaye bazinikele, banemfesane yaye xa kukho ingxaki entsatsheni okanye phakathi kwabahlobo, baya kwenza konke okusemandleni abo ukuyicombulula. I-intuitive kakhulu, iiPisces zinokuva xa kukho into engalunganga, nangaphambi kokuba yenzeke. Iintlanzi zivakalisa kwaye aziyi kunqikaza ukubonisa iimvakalelo zabo kubantu abazungezile. Balindele ukuba abanye bavuleleke njengoko benjalo. Ukunxibelelana nabo babathandayo kubaluleke kakhulu kubo.
Umsebenzi wePisces kunye nemali
Inengqondo kwaye ihlala iphupha, iiPisces ziziva ngcono xa zikwimo yokukhulula izakhono zazo zokuyila, kwaye ngcono nakwisisa. Imisebenzi ehamba neePisces zezi: amagqwetha, umyili wezakhiwo, ugqirha wezilwanyana, imvumi, unontlalontle, kunye nomyili wemidlalo. Bekhuthazwa kukufuna ukwenza iinguqulelo kubomi babanye, bakulungele ukunceda kwanokuba oko kuthetha ukwenza izinto ezingaphaya kwemida. Lo mqondiso wezodiac unovelwano, usebenza nzima, uzinikele, kwaye uthembekile. IiPisces zilungile kakhulu ekusombululeni iingxaki. Uninzi lwexesha IiPisces aziniki kubaluleka kakhulu kwimali. Badla ngokugxila ngakumbi kumaphupha kunye neenjongo zabo, kodwa baya kuzama ukwenza imali eyaneleyo ukuze bafezekise iinjongo zabo. Kulo mmandla kukho amacala amabini ePisces, kwelinye icala, baya kuchitha imali eninzi ngaphandle kokucinga ngayo, ngelixa kwelinye, banokuba buhlungu kakhulu. Yiba nokuba kunjalo, ekugqibeleni baya kuhlala benemali eyaneleyo yokuhlawula ubomi obuqhelekileyo.
Indlela yokutsala indoda yePisces
I-Romance sisikhokelo sehlabathi lomntu wePisces. Indoda ezelwe phantsi komqondiso weenkwenkwezi wePisces iphila ukukholisa nokuthanda. Indlela efanelekileyo yokukhohlisa indoda yePisces kukuzivulela kuye. Ezinye zezona mpawu zibalaseleyo zePisces luvelwano, uvelwano kunye nobubele. Ungumntu onobubele oya kuyazi into oyifunayo kwaye uya kukunika rhoqo kangangoko kunokwenzeka. Usoloko ekhangela iindlela zokunceda abanye yaye uya kuyazi into oyifunayo kwangaphambi kokuba uyazi. Umnqweno wakho wokukholisa abanye ukushiya usesichengeni sokuphathwa kakubi nokuxoka. Uya kusebenzisa ukucinga kwakhe kwasendle ukukukholisa. Indoda yePisces iyakuthanda ukuhleka, ngoko ukuba ucinga ukuba uyonwabile kwaye awunzima, unokujonga phambili kubudlelwane obanelisayo ngokweemvakalelo.
Abafazi bePisces baziwa ngokuthamba, ukucinga, uvelwano, kunye nokuba ngabantu abanovelwano kakhulu. Ukuba ufuna ukutsala umfazi ozalwe phantsi kophawu lwezodiac Pisces, kufuneka ube nothando kwaye ube noburharha. Kwakhona kubalulekile ukuba ngumphulaphuli olungileyo.
Ubuntu bePisces bunovelwano kwaye bugcwele uthando olungenammiselo. Xa sele uyifumene ingqalelo yakhe, uya kukuvulela isifuba ngokukhawuleza. Ukwabelana ngesondo kunye nomfazi wePisces kuya kuqhushumba kwaye unokuqiniseka ukuba awusoze udikwe kwigumbi lakhe.
Abasetyhini abazalwe phantsi komqondiso weePisces bayakonwabela ukuba neengxoxo eziphilileyo malunga nezinto zomoya nezomoya. Unengqiqo, kwaye uya kuyiqonda ngokukhawuleza ukuba yonke into oyifunayo kukwabelana ngesondo. . Ufuna ukuphathwa ngentlonipho kwaye awusoze ukwazi ukumhenda ngeentsuku zokuqala. Ukuba unyanisekile kwaye uvulekile kuye, ngokukhawuleza uya kuziva enxibelelene nawe.
Umfazi wePisces unovelwano kakhulu ngokwemvelo, yingakho kungelula ukuba axolele okanye alibale. Ukuba intliziyo yakho iye yabuhlungu kwixesha elidlulileyo, uya kuba nzima ukucinga ngokuqalisa ubuhlobo obutsha.
Iimpawu ezihambelanayo zePisces kufuneka ziqwalasele: Taurus , Umhlaza , I-scorpio , Capricorn
Leo I-Capricorn Khetha Uphawu Isagittarius Itaurus